एक नेता हुन या छैन एक नेता हुन - नेतृत्व बारे
“एक नेता हुन या छैन एक नेता हुन” – नेतृत्व बारे
नेताहरू र नेतृत्व
हामी अक्सर सुन्न एक साधारण वाक्य नेतृत्व छैन लिएका दिइएको छ छ, के यो साँचो हो? अर्को साधारण वाक्य तपाईं एक नेता जन्म छन् छ, यो एक प्राकृतिक वरदान छ भनेर. केही पक्षमा यो छ. तर, भनेर धारणा परिवर्तन गर्न प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने केही मनोवृत्ति छन्.
या त भनिन्छ - - एक जन्म नेता करिश्मा संग एक व्यक्ति छ. उहाँले मानिसहरूलाई संग एक प्राकृतिक सहानुभूति छ र उहाँले चाहनुहुन्छ के तिनीहरूलाई विश्वस्त सक्छ. उहाँले समस्याको परिस्थिति र छिटो जवाफ एक वैश्विक दृष्टि छ. उहाँले संसारमा उहाँको वरिपरि exploding छ जब आफूलाई शांत राख्छ. उहाँले उहाँको वरिपरि कसैले को नाम र प्रोफाइल सम्झनुहुन्छ. उहाँले एक बहु-कार्य व्यावसायिक छ. उहाँले व्यापार विभिन्न क्षेत्रमा र पनि विभिन्न कारोबार नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्छ. उहाँले प्राकृतिक negotiator छ, आंतरिक र बाह्य, व्यापार वातावरण मा. उहाँले स्वाभाविक मान्छे प्रबंधन. उहाँले मूल्यांकन, छनौट गर्न कसरी थाह छ र उसलाई काम गर्न सबै भन्दा राम्रो पेशेवरों आकर्षित. उहाँले एक दूरदर्शी छ. उहाँले पनि निपुण व्यावसायिक गर्न novice एक सन्दर्भ छ, र यति मा.
वाह! पूरा गर्न एक अनन्त सूची देखिन्छ!
वास्तवमा, ती कौशल र एक वरिष्ठ स्थिति छ गर्ने लक्ष्य लिएको छ कि कुनै द्वारा हासिल गर्नुपर्छ सक्छ, कुनै पनि संगठन व्यवस्थापन गर्न, टीम वा समूह.
सबै को पहिलो, तपाईं आत्म-मूल्यांकन एक नेता हुन तपाईं चाहनुहुन्छ भने थाहा वा छैन बनाउन र अधिक जिम्मेवारी गर्नुपर्छ, र लक्ष्य हासिल गर्न ऊर्जा जीवन समर्पण गर्न. यो एउटा सजिलो बाटो छैन, अक्सर सफलता देखि विफलता र विफलता देखि सफलता धेरै चाँडै स्थानांतरण , र धेरै पटक यो एकान्त बाटो छ.
"एक नेता बन्न 10 चरण" जस्तै प्रतिज्ञा सावधान रहनुहोस्. कुनै जादू छ, वा नुस्खा वा सूत्र एक नेता मा तपाईं कायापलट. एक रूप मान्यता गर्न यो एक लामो बाटो र प्राकृतिक विकास लिन्छ.
तर तपाईं आफैलाई तयार पार्न सक्छन्, यो मौका आउँदा, जिम्मेवारी ग्रहण गर्न तयार.
तपाईं आफ्नो यात्रा तयार गर्न केही सुझाव पाउन सक्छन् तल:
तपाईं अनुयायीहरूलाई छ आवश्यक नेतृत्व गर्न, पहिलो कुरा हो तर मान्छे सामना गर्न कसरी थाह. आफ्नो मान्छे व्यवस्थापन कौशल सुधार, कम्तीमा तीन अलग उल्लेख या तरिका र यो हासिल गर्न प्रविधी छ. केही पुस्तकहरू पढ्न र केही पाठ्यक्रम लिन, अत्यधिक सिफारिस वा मान्यता पेशावरहरूसँग छोटो-समय पाठ्यक्रम, तपाईं वेब मा पत्ता भन्ने होइन पहिलो एक. मानिसहरू व्यवस्थापन सिकाउन सजिलो छ, अभ्यास कठिन. तपाईं भावनाले व्यवहार गरिनेछ, समानुभूति, उत्प्रेरणा, egos, शक्ति विवाद, घरबारविहीन, परिवर्तन को डर, र यति मा. आजकल, पनि, सांस्कृतिक पक्षलाई मौलिक छन्, हामी एक globalized अर्थव्यवस्था र सम्बन्धित संसारमा, र विभिन्न संस्कृतिका जागरूकता आवश्यक छ.
तपाईं प्रस्तुतिहरु बनाउन र सार्वजनिक बोल्न कसरी जान्नु आवश्यक. बोली र प्रस्तुति गर्न सम्बन्धित पनि सञ्चालन गर्ने क्षमता छ, नियन्त्रण र सुरु र फलदायी सभाहरूमा समाप्त.
बातचीत अर्को आधारभूत कला हो. तपाईं आफ्नो संगठन मा र पनि व्यापार साझेदार संग आंतरिक बातचीत. तपाईं धेरै परिस्थितिमा र धेरै ठाउँमा लगभग हरेक दिन बातचीत.
एक रणनीतिकार हुन. परिदृश्यहरु विकास, परिस्थिति र तथ्याङ्कले को मूल्याङ्कन, र साँच्चै विश्वसनीय जानकारी आधारित निर्णयहरू एक दैनिक गतिविधि हुनेछ. आफ्नो रणनीति कौशल सुधार. रवि Tzu पढ्नुहोस्, Mintzberg, Prahalad, पोर्टर, र यति मा.
आफ्नो गतिविधिहरु प्राथमिकता, आफ्नो एजेन्डा संगठित र सधैं नयाँ अंतर्दृष्टि एक दैनिक क्षण र रुझान मूल्याङकन गर्नु गर्न. यो रोक्न र तपाईं गरिरहेका छन् र परिणाम हासिल के आत्म-मूल्यांकन गर्न महत्त्वपूर्ण छ, र सधैं नवाचारै लागि खोज र बाहिर-को-को-बक्स लाग्छ.
बेंचमार्किंग अर्को महत्त्वपूर्ण गतिविधि छ; अन्य नेताहरूसित सिक्न, जहाँ तिनीहरूले सफलता थियो र तिनीहरूले विफल कहाँ.
राजनीतिक बारे मिति गर्न रहनुहोस्, आर्थिक, र सांस्कृतिक समाचार र सम्बन्धित व्यवसाय.
आफ्नो सञ्जाल जगाउन, पेशेवर र व्यक्तिगत. विजेताहरु सामेल, आफ्नो प्रतिष्ठा हुनेछ, धेरै पटक, आफ्नो लिंक मापन. भन्छन् कि एक बोली छ: तपाईं चिन्ने भन्नुहोस् र म तिमीलाई छन् जो तिमीहरूलाई भन्नेछु.
आफ्नो जीवन र काम संतुलन. काम बीच एक तिपाई छ, सबै तीन पैसा र परिवार पे ध्यान. तपाईं एक बाँणशैली क्षेत्र छ भने, यो सबै अरूलाई तनाव पैदा हुनेछ. व्यावसायिक सफलता जीवनमा हरेक कुरा छैन.
आजकल, यो "स्मार्ट मान्छे" को समय हामी हाल अन्तरराष्ट्रिय संकट संग विश्व देखेर छन् सबै मुद्दाहरू संग surpassed छ - नैतिकता, सामाजिक र पर्यावरणीय जिम्मेवारी र प्रशासन.
समाप्त गर्न, हतार छैन. जल्दी सिद्धताको शत्रु छ. फेरि, रूपमा पहिले नै भने, नेतृत्व छैन लिएका दिइएको छ. तपाईं तयार र कौशल र अनुभव को एक व्यापक स्पेक्ट्रम संग गर्न आवश्यक हुनेछ. पनि धेरै चाँडै आउँछ भन्ने कुनै जान्छ. त्यसैले यो समय आवश्यक बलियो र गाडेको ascent छ, मात्र राम्रो तयारी मान्छे हासिल गर्न सक्षम हुनेछ जो लगनशीलता र आत्म-विश्वस्त.
मारियो लुइस टावारेस फरेरा द्वारा
←5पोर्टर सेना